GIMP 2.9.4 inowanikwa, iyo yekutanga yekuvandudza yegore inosvika | Linux Vakapindwa muropa
GIMP 2.9.4 inowanikwa, iyo yekutanga yekuvandudza yegore inosvika
Nyika ye free software ine akati wandei akakosha mashandisiro, asi zvirokwazvo imwe yeakanyanya iwo ndeye GIMP, iyo chifananidzo chekugadzirisa chigadzirwa chakakonzera GTK maraibhurari uye nayo kuGNOME uye kune yakafararira software musimboti uye yakakosha base yemahara software sekuzviziva kwedu nhasi. Zvakanaka, maawa mashoma apfuura iyo kuburitswa kweGIMP 2.9.4, iyo yekutanga yekuvandudza yegore 2016 yeichi chishandiso, inouya iine huwandu hwakanaka hwekuwedzera kwakakosha.
Mushure memwedzi ingangoita misere yekushanda nesimba (rangarira izvozvo mhando 2.9.2 yakanga yaburitswa kumashure munaNovember wegore rapfuura) inowedzera Mafambiro Makuru muMufananidzo Ruvara Management, mukuwedzera kunatsiridza manejimendi emapuru profiles uye kuunza chishandiso chitsva chemavara. Dzimwe gadziridzo dzinosanganisira DND widget, kugona kuteedzera uye kunama matara pakati pemifananidzo yakasiyana, yepamusoro yekumhanyisa mhanyisa, sarudzo nyowani 'Optimize' inowanikwa zvese kubva kune zvakajairika menyu uye kubva kune yemukati mamiriro menyu emufananidzo wega wega.
Pakati pechikumbiro sarudzo dzinoverengeka dzakawedzerwa mumamenyu, kuwedzera kune zvimwe zvine chekuita nekuvandudzwa kwemifananidzo (kusanganisa, mufananidzo wemashiripiti kuenderana), uye muiyo interface (GUI) isu tashanda pabar status uye mumadhibhodhi (zvese mukugadzirwa kwavo uye mune zvavanogona kuita), kunyangwe isu tichigona taura zvakafanana zve windows (iyo shanduko yeiyo yakazara skrini mode yakagadziridzwa) uye mu GIMP zvaunofarira, uko isu ikozvino tave nemikana yakawanda yakawanda (pakati payo yakanaka kwazvo yekushandisa nzira inogadziriswa yekhibhodi pamwe chete negumbo vhiri kugadzirisa saizi yepenzura kana brashe munguva chaiyo).
Chekupedzisira, kutaura kuti pane akati wandei aesthetic tweaks, mukushandiswa kwetimusoro kana mukusarudzwa kwemashandisirwo emifananidzo, uye shanduko zhinji uye zvishoma zvigadziriso zvatingawane kuwana tichitarisa kune iyo changelog (paGitHub). Saka ikozvino tinogona tora GIMP 2.9.4 kubva ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GIMP 2.9.4 inowanikwa, iyo yekutanga yekuvandudza yegore inosvika
Izvo zvakanaka kwazvo kuti iwe chengetedza uye kugadzirisa gimp
Pamusoroi ruzivo rwangu rudiki, ndine vhezheni 2.8.10, asi ini handizive maitiro ekugadzirisa, ndinotenda rubatsiro
Iyi inguva yekuvandudza, ndiko kuti, haina kuburitswa kuti ishandiswe nevazhinji. Iyo yazvino vhezheni yakagadzika ndeye 2.8.xx. Kuti uedze 2.9, iwe uchafanirwa kurodha pasi pasuru uye wozvinyora pachako (zviri nyore kwazvo kuzviita, asi zvinogona kutora nguva yakareba), woishandisa pamwe neshanduro yakagadzikana (nekuti iyi vhezheni yekuvandudza, kana yaiswa inoita kwete kutsiva 2.8).
Chero mibvunzo bvunza pano kana nditumire email. Ndiri zvakare paTeregiramu: @RREDesigns.
Kwaziso uye rombo rakanaka. :)
Franco Chiappero akadaro
Nezve linux unofanirwa kuwedzera nyowani nyowani kubva kune iyo terminal.
1): sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: otto-kesselgulasch / gimp-Edge
2): sudo apt-tora kugadzirisa uye isa
3): sudo apt-tora kuisa gimp gimp-gmic gmic
Kubva paWindows, chinhu chinonyanya kukosha kurodha pasi inotakurika vhezheni ye: http://www.partha.com/ Chinhu chakanaka ndechekuti iyi laptop inotouya neese ma plugins akaiswa.
Rino peji rekurodha yazvino vhezheni ye windows ndeiyi: http://nightly.darkrefraction.com/gimp/
Pindura Franco Chiappero
Chero mibvunzo bvunza pano kana nditumire email. Ndiri zvakare paTeregiramu @RREDesigns.
Iyi ndiyo Riffle, iyo isingazivikanwe internet inovandudza TOR
Maitiro ekuve neFacebook Messenger pane yedu Linux